हलेसीतुवाचुङका सबै धितुङवासीको घरघरमा उज्यालो बत्ति
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नंं. ८, धितुङ उज्यालो वडा घोषणा भएको छ । हलेसीतुवाचुङलाई उज्यालो नगरपालिका बनाउने अभियानकै क्रममा वडा नं. ८ धितुङका सवै घरमा विद्युत विस्तार गरी मंगलबार उज्यालो वडा घोषणा गरिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट वडाका लागि विनियोजित ७ लाख लागत र नगरपालिकाको तर्फबाट रु ४० लाख वढीका विद्युतिकरणका लागि ग्याल्भोनाइज्ड पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका आवश्यकीय विद्युतीय सामाग्रीहरु उपलव्ध गराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा विद्युत विस्तार गरी उक्त वडाका सबै घरधूरीमा विध्युत सेवा उपलव्ध गराएर समग्र वडालाई उज्यालो वडाका रुपमा घोषणा गर्न सफल भएको नगरप्रमुख इवन राई बताउनुहुन्छ । हिजो मंगलवार वडाध्यक्ष पृथ्विराज राईको अध्यक्षतामा आयोजना भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नगर प्रमुख इवन राईले बखुवा भञ्ज्याङ धितुङमा रहेको ट्रान्सफर्मरको एम.सि.सि.बी. अन गरी उज्यालो वडा घोषणा गर्नु भएको हो ।
बर्षाै देखि विजुली बाल्ने धितुङ बासीहरुको सपना साकार भएकोले स्थानीय बासीहरु हर्षित भएको वडा अध्यक्ष पृथ्वीराज राईले जनाउनुभयो । वडाले देखेको सपना मध्ये एउटा आधारभूत सपना पुरा भएको वडा सदस्य खेमराज कार्की बताउनुहुन्छ । विद्युत विस्तार कार्य सम्पन्न गरी पौष २४ गत्ते विहान ७ बजेबाट हाइटेन्सन लाईन परिक्षण गरिएको थियो ।
यस अगाडि नै वडा नं.४ वडहरे र वडा नं. ६ मंगलटारलाई उज्यालो वडा घोषणा गरिसकिएको र अन्य वडाहरुमा पनि विध्युत विस्तारको काम तिव्र गतिमा भैरहेको नगरउपप्रमुख विमला राइले हलेसी एफएमलाई बताउनुभयो ।
हिजै भूमिराज राईको अध्यक्षतामा वडास्तरीय युवा तथा खेलकुद विकास समितिको गठन गरी नगरपालिकाको तर्फबाट नगरप्रमुख राईले खेलकुद सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा नगरप्रमुख इवन राइका साथै नगरउपप्रमुख विमला राई , वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष रमेश राउत , वडा नं ९ का वडाध्यक्ष काशी राज राई, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविकिरण आचार्य , नगर शिक्षा शाखा संयोजक पदम कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।